भारतमा पनि लियो कोरोना भाइरसले एक जनाको ज्यान - हाम्रो देश
भारतमा पनि लियो कोरोना भाइरसले एक जनाको ज्यान
काठमान्डौ : भारतमा कोरोना भाइरसका कारण एक जनाको मृत्यु भएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यम ‘इकोनोमिक टाइम्स’ का अनुसार कर्नाटक, कालाबुर्गीका ७६ वर्षीय पुरुषको मंगलबार निधन भएको हो। ती व्यक्तिलाई डाक्टरहरूले कोरोना संक्रमण भएको अनुमान गरे पनि स्वास्थ्य जाँचको रिपोर्ट आइसकेको थिएन। उनको मृत्युपछि आएको रिपोर्टले उनलाई कोरोना संक्रमण भएको देखाएको कर्नाटक राज्यका वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी डा. सुरेश शास्त्रीले बिहीबार जानकारी दिएका छन्।
कालाबुर्गीका ७६ वर्षीय पुरुषको निधन भएको छ उनलाई कोभिड-१९ भएको पुष्टि भएको छ,’ डा. शास्त्रीका भनाइ उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन्, ‘उनको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू खोज्ने, आइसोलेसनमा राख्ने लगायत काम भइरहेको छ।’ डा. शास्त्रीका अनुसार मृतक व्यक्ति तेलांगनाको निजी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। तेलांगना सरकारले पनि उनमा कोरोना भएको पुष्टि गरेको छ। यही जानकारी कर्नाटकका स्वास्थ्यमन्त्री बी. श्रीरामुलुले पनि दिएका छन्। मृतक व्यक्ति हालै साउदी अरेबियाबाट फर्केको उनले जानकारी दिएका छन्।
कोरोनाका कारण मृत्यु पुष्टि भएको भारतमा यो पहिलो घटना हो। यो बाहेक कर्नाटकमा पाँच जना संक्रमित भेटिएका छन्। पछिल्लो पटक संक्रमित पाइएका व्यक्ति २६ वर्षीय पुरुष हुन् जो हालै ग्रिसबाट फर्केका हुन्। बिहीबार ती व्यक्तिमा कोरोना भएको पुष्टि भएसँगै उनलाई अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखिएको छ। उनको अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ।